Sanadkii 2007, ka dib markii laga toogtay lugta, Maryan Maxamed waxay ka soo qaxday rabshadaha ka socda Soomaaliya iyada iyo hooyadeed, aabaheed, iyo walaalkeed. Waxay u safreen Uganda, halkaas oo Maryan ay ku guursatay oo ay u dhashay saddex carruur ah. Muddadii toddobada sano ahayd ee ay qoxootiga ku ahayd Uganda, haweeney ka tirsan UN-ku waxay si isdaba joog ah ugu dhiirrigelisay inay codsato dib-u-dejin iyada kaligeed ah, inay awoodi doonto inay reerkeeda keento dhowaan. Naagtii waxay ku tiri Maryan, "Adigu itaal baad leedahay."
Sannadkii 2013, iyada oo gabadheeda curadka ah iyo wiilkeeda u reebtay seygeeda Ugaaska, Maryan iyo gabadheeda afar jirka ah, Fatxi, waxay aadeen dalka Mareykanka. Intii lagu guda jiray Imtixaankii Caafimaadka Gudaha ee loogu talagalay Qaxootiga imanaya, Maryan waxay ogaatay inay uur leedahay. Gabadheeda, Nalyal, waxay dhalatay Maarso 2014. Qoysku waxay ka guureen Phoenix waxayna u guureen Mankato Oktoobar iyo, bilo yar uun ka dib, Maryan iyo Fatxi waxay iska qoreen Xarunta Talo Bixinta Talo-siinta Wanaagsan.
Sanadkii 2019, Maryan waxay codsatay muwaadinimo; imtixaankeeda iyo wareysigeeda waxaa loo qorsheeyay horaanta bisha Luulyo. In kasta oo ay dhigatay fasal sannad dugsiyeedka oo dhan, haddana weli wax badan ayay baraneysaa - sidaa darteed waxaan u oggolaannay inay la dhigato dugsiga xagaaga iyada iyo gabdhaheeda! Maryan waxay ku muujisay iimaankeeda salaada, iyadoo noo sheegaysa, “Waxaan Ilaahay ka baryayaa. Ilaah wuxuu ii sheegay inaan dhaafi doono. ” Maryan shaqadeedii adkayd iyo ducadii waa laga helay: waxay ka gudubtay wareysigii iyo imtixaankii, waxay noqotay muwaadin dhalasho asbuucyo kadib. Noqoshada Mareykan cusub waa qeyb ka mid ah qorshaha Maryan: iyada, Nalyal, iyo Fatxi waxay sii wateen barashada labo saacadood usbuucii Xarunta Waxbarshada illaa COVID-19 ay nagu qasabtay inaan goor hore soo afjarinno sanad dugsiyeedka 2019-2020.
Maryan muddo sanado ah, Maryan waxay si taxaddar leh ula shaqeyneysay qareenkeeda si ninkeeda, gabadheeda curad, iyo wiilkeeda ay u keento Mareykanka Dib udhaceeda ugu horeyay wuxuu ahaa Amarka Fulinta ee 13769, kaasoo ka mamnuucayay qaxootiga inay yimaadaan wadanka 120 maalmood. Marka xigta, waxay ahayd inay diyaarsato baaritaanka DNA iyada iyo mid kasta oo carruurteeda ah oo ku nool dibedda si loo caddeeyo xiriirkooda. Imtixaan kasta wuxuu qoyska uga baxayay $ 800. Isla markii ay qoysku ka sifeeyeen caqabadoodii ugu dambeysay ayna bilaabeen inay qorsheeyaan la midoobiddooda, cudurka faafa ee coronavirus ayaa soo ifbaxay. In kasta oo Maryan ay sii wadayso korinta Fatxi iyo Nalyal, waxay sidoo kale ka shaqaysaa sidii ay u ururin lahayd lacagta loo baahan yahay ee raaca diyaaradda, iyada oo qoyskeeda kula soo xiriiraysa Skype iyada oo ku kalsoon in maalinta ay imaaneyso carruurta iyo waalidiinta ay dib u midoobi doonaan ugu dambeyn.
Waad taageeri kartaa bartayaasha sida Maryan, Fathi, iyo Nalyal. Halkan Guji ama wac Dave Coughlan 507-389-4235 si aad wax badan uga barato.
Horaantii sanadkaan, Walaasheed Dorothy Zeller iyo Dave Coughlan waxay ka aqbaleen deeq $ 1,500 oo ka timid Xarunta Caafimaadka ee Mankato. Hadafka aasaasiga ah waa dhiirigelinta iyo taageerida caafimaadka iyo wanaaga bulshadeena iyada oo loo marayo dadaallada caafimaadka ee kor u qaadaya laguna hagaajinayo caafimaadka bulshada. Hadiyadani waxay taageertaa barnaamijka deeqda waxbarasho ee Xarunta Waxbarshada ee qoysaska.
Carlos Maldonado wuxuu ku dhashay San Lucas Toliman ee Guatemala, wuxuu ka mid yahay sagaal caruur ah oo qoyskiisa ah. Markuu ahaa nin dhalinyaro ah oo 23 jir ah oo ku dhexjiray dagaal sokeeye oo arxan daro ah oo socday mudo 36 sano ah, Carlos wuxuu iskaa wax u qabso ugu shaqeeyay San Lucas Mission, isagoo aasaaska u dhigay dhisme cusub oo aakhirkii loo adeegsaday maktabad iyo hool lagu cunteeyo. Iyadoo uu hogaaminayo Fr. Greg Schaefer oo ka mid ah Indhaha Hurdada leh iyo Walaalaha Dugsiga, Carlos si adag ayey u shaqeeyeen waxayna horumar joogto ah ka sameeyeen dhismaha. Markii ay aragtay shaqadiisa adag iyo kartidiisa, Sr.Maureen O'Keefe ayaa waydiisay hadii uu jeclaan lahaa inuu aado Mareykanka. Isagoo ka soo jeeda qoys ballaaran, wuxuu u sheegay inuusan u maleynaynin inay taasi waligeed suurta gal noqon doonto. In kasta oo dagaalka sokeeye uu ku soo food leeyahay gadaal - ama laga yaabo in ay sabab u tahay, Fr. Greg iyo Sr. Maureen waxay ka shaqeeyeen qabanqaabada. Kaliya hal bil kadib tigidh hal dhinac ah, Carlos wuxuu ka degay St. Paul isagoo wata soddon maalmood oo fiiso dalxiis ah.
Waxay ahayd Febraayo, 1967, jawiguna qabow daran ayuu u ahaa qofkan cusub ee ka yimid Bartamaha Ameerika. Carlos ma aqoon hal eray oo Ingiriis ah. Intii uu ku noolaa magaalada St. Paul, Carlos wuxuu cusbooneysiiyay fiisaha dalxiis ee 30 maalmood ah saddex jeer. Sarkaalka waaxda socdaalka ayaa ugu dambayntii u sheegay in haddii loo ogolaado iskuul inuu sii joogi karo afar sano oo dheeraad ah fiisaha ardayda. Wuxuu uyimid Mankato asaga oo la kaashanaya turjubaan, Carlos wuxuu si dhakhso ah ugu gudbay imtixaankii galitaanka. Waxaa loo aqbalay arday ahaan South Central College wuxuuna helay fiisada ardayga ee afarta sano ah. Sr. Maureen O'Keefe waxay Carlos u soo bandhigtay Sr Mary Donald, oo ah aasaasaha Xarunta Waxbarashada. Carlos wuxuu ahaa arday xiiseeya luuqada lix todobaad gudahood, Sr. Mary Donald ayaa ka dhigtay inuu aqriyo injiilka Axada Mass.
In 2019, Carlos wuxuu sheekadiisa la wadaagay kaqeybgalayaasha Shrimpin 'on the Hill, sanadkeena lacag ururinta.
Waxaa sidoo kale loo soo bandhigay Fr. Paul Halloran oo isagu siiyay shaqo qabashada howlaha dayactirka ee Xarunta Newman. Fursadani waxay u oggolaatay Carlos inuu helo qol leh sariir. Intii uu weli dhiganayay Kulliyadda Koonfurta Dhexe, Carlos waxaa sidoo kale shaqo siiyay qoyskii Coughlan ee ka shaqeynayay dhagaxa. Inta udhaxeysa Xarunta Waxbarashada iyo shaqooyinkiisa, Carlos wuxuu sii waday inuu ka shaqeeyo xirfadahiisa luqadeed. Wuxuu noo sheegay inuu Ingiriis wanaagsan ka bartay Sr Mary Donald iyo Ingiriis xun oo dhagaxa laga qodayo. Ka sokow inuu wax ka barto Kulliyadda Koonfurta iyo Bartamaha, Carlos wuxuu sidoo kale ka qayb galay Mankato State College. Wuxuu bartay injineernimada.
Isaga oo weli arday ah, waxaa shaqaaleysiiyay 3M. Carlos wuxuu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay 3M, New Ulm, St. Paul, iyo Mexico. Carlos xitaa wuxuu lahaa jago hoggaamineed xarunta 3M ee Mexico. Intii uu horay iyo gadaal uga sii socday xadka uu ka shaqeynayo Mexico oo uu ku noolaa Texas, wuxuu codsaday dhalashadiisa Mareykanka. Hadda waa labo dhalasho oo Mareykan ah iyo Guatemala. Haatan waa hawlgab, Carlos iyo xaaskiisa, Rosanna, waxay u safrayaan Shakopee, Minnesota si ay uga baxsadaan xagaaga kulul ee San Lucas, Guatemala, iyagoo ku laabtay Guatemala si ay uga baxsadaan xilliga qaboobaha ee Minnesota.
2018, Carlos wuxuu ku sugnaa Mankato wuxuuna la kulmay saaxiibkiis, Dave Coughlan. Wuxuu weydiiyay Dave wax ku saabsan Sr Mary Donald, oo uusan arkin qiyaastii 50 sano. Dave wuxuu sameeyay wicitaan saacad gudaheed, macalinkii hore iyo ardayguba waxay kujireen xasuus hore. Waxay markale kulmeen 2019 booqasho kale oo gaaban.
Carlos wuxuu noo sheegayaa inuu ku faraxsan yahay inuu qatar u galay inuu ka tago qoyskiisa iyo gurigiisa San Lucas isagoo nin dhalinyaro ah. Wuxuu aad ugu mahadcelinayaa Sr.Mary Donald oo waxbartay isaga oo mid-mid ah iyo dhamaan dadka u suurta galiyay inuu ka dhabeeyo riyadiisa Mareykanka.